Enginar Tasfahuun Camadaa mana Hidhaa keessatti ajjeefame; reeffa isaa argachuuf maatiin kadhachaa jira | Oromia & Oromo Affairs
Enginar Tasfahuun Camadaa mana Hidhaa keessatti ajjeefame; reeffa isaa argachuuf maatiin kadhachaa jira
Posted by A. Kenate on August 25, 2013
24 Hagayya 2013 (Oromedia) — Manni hidhaa Qaallittii fi Hospitaalli Minilik reeffa ilmaan Oromoo waggaa waggaan oomishuu isaanii itti fufanii jiru.
Oduun Finfinnee keessaa nu dhaqqabe akka hubachiisutti, mootummaan Wayyaanee hidhamaa harka isaa jiru ajjeessee hospitaala Minilikitti darbuun reeffa illee akka hin arganneef maatii mankaraarsaa jiran.
Akka oduun arganne ibsutti guyyaa har’aa Hospitaalli Miniliki reeffa gooticha Oromoo, Enginara Tasfahuun Camadaa, maatiitti dabarsee kennuu diduun imimmaan ilmaan Oromoo akka dachaa dachaan dhangala’u taasisee jira.
Yeroo ammaa kanatti illee Oromoon hedduun reeffa Tasfahuun fudhachuuf Hospitaal miniliik fuulduratti walgahan illee haga ammaatti reeffi hin kennamiifiin akka jiru beekamee jira.
Akka oduu nu dhaqqabe kanaatti Tasfahuun kan ajjeefame Jimaata darbe galgala yookaan halkan, 23/08/2013, yoo ta’u, ganama isaa reeffi isaa gara Hospitaala Minilikitti darbame.
MaatiinTasfahuun garuu Roobii darbe, 21/08/2013 dhaqanii ijaan arganii jiran. Yeroo sanatti wal’aansa dhabee rakkachaa akka jiru ibsatee akka ture kan ibsan firoottan isaa, haalli yeroo sanaa garuu kan du’aaf isa ga’u akka hin turre shakkii tokko malee dubbatu.
Kana duras wal’aansa dhabee akka iyyachaa ture kan yaadachiisan kanneen Tasfahuun fa’aa waliin mana hidhaa keessa turan akka ibsanitti, Tasfahuun wagga lamaaf nama irraa adda bahee qobaatti hidhamuun hiraarfamaa akka ture dabalanii addeessanii jiru. Yeroo sanattis mana murtiitti otuu hin hafiin iyyatee deebii kan kennuuf dhabamuu isaa illee hiroyyooti isaa ragaa bahu.
Haata’uutii, Sambata kaleessaa obboleettiin isaa yeroo isa gaafachuuf Qaallittii deemtetti, guyyaa guutuu otuu itti hin himiin erga achi ishii oolchanii booda ‘hospitaala deemee jira, achi dhaqii gaafadhu,’ akka ittiin jedhan namooti ijaan argan nuuf ibsanii jiru.
Yeroo odeeffannoo kana walitti qindeessaa jirru keessatti ergaan karaa marsaa walqunnamtii nu dhaaqqabe akka ibsutti, Oromoon yeroo lubbuun jirus yeroo du’us gidiraa walfakkaataan akka irra gahu kan ibsuu dha.
“Nama jiraatti dhabne, du’aa isaa ill argachuuf hin milkoofne,” kan jedhe, namni maqaa isaa ibsachuu hin feene tokko, “reeffa nama keenyaa argachuufis qabalee irraa hayyama argachuun dirqama nutti ta’ee jira,” jechuun gidiraan ilmaan Oromoo irra gahaa jiru saaxilee jira.
Tasfahuun Camadaa fi Masfin Abbabaa bara 2007 biyya Keenyaa keessaa qabamanii gara Itoophiyaatti erga geeffamanii booda hidhaa fi hiraarsaa olaanaa keessa turuun isaanii kan yaadatamuu dha.
Hiraarsaa bara dheeraa booda bara 2008 himannaan sobaa itti banameen murtiin hidhaa umurii guutuu itti darbee akka jiru illee kan beekamuu dha.
Tasfahuun erga murtiin umurii guutii irratti darbee boodas akka maatii isaa waliin wal hin argine, akka wal’aansa fayyaa hin arganne, akka qobaatti hidhamu godhamee akka ture kanneen itti dhiyeenyaan dhimma isaa hordofan nuuf ibsanii jiru.
Mootummaan Wayyaanee kanaan duras bara 2005 fi bara 2006 keessa barattoota Oromoo kan akka Alamaayyoo Garbaa, Gaaddisaa Hirphasaa fi sabboontota Oromoo hedduu mana hidhaa keessatti ajjeessuun yakka olaanaa Oromoota irratti raawwachuun kan beekamuudha.